Shikhar Post » नयाँ वर्ष नेपाललगायत अरू कुन कुन देशमा मनाइदैछ ?
नयाँ वर्ष नेपाललगायत अरू कुन कुन देशमा मनाइदैछ ?
काठमाडौं, १ बैशाख २०७६ । नयाँ वर्ष आज अर्थात् वैशाख १ गते धुमधामका साथ मनाइंदैछ। देशका विभिन्न भागमा यसलाई फरक फरक सांस्कृतिक महत्वका साथ मनाइने गरिन्छ । वैशाख १ का अतिरिक्त नेपालमा राई, लिम्बू र तामाङहरूले मनाउने भिन्नाभिन्नै ल्होसार, नेवारहरूको नेपाल संवत, थारुहरूको माघी या मुस्लिम नयाँवर्ष पनि नयाँ वर्षका उदाहरणहरू हुन्।
यी मध्ये वैशाख १ गतेलाई नेपालको सरकारी नयाँ वर्षका रूपमा पनि मान्यता प्राप्त रहेको छ।
आजका दिन एक आपसमा शुभकामना आदान–प्रदान गरेर तथा जीवनमा केही नौलो काम गर्ने संकल्प गरेर मनाउने चलन रहेको छ।
वैशाख १ गते नेपालको मात्र नयाँ वर्ष भने होइन। यस दिन नेपालका अतिरिक्त एनी धेरै देशहरूमा समेत नयाँ वर्षको रुपमा मनाइने गरिन्छ।
आज नेपाल नेपालका अतिरिक्त बंगलादेशमा समेत आज नयाँ वर्ष मनाइने गरिन्छ । ‘पोहेला बोइसाख’ भनिने यस दिनलाई बंगलादेशमा पारम्परिक नयाँ वर्षको रूपमा मनाइन्छ। यस दिन मानिसहरू ‘एसो बोइसाख एसो एसो..’ अर्थात ‘आऊ बैसाख आऊ आऊ..’ भन्ने गीत गाउँदै उत्सव मनाउने गर्दछन् ।
बंगलादेशमा जस्तै भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यमा यसलाई ‘पोहेला बोइसाख’ भन्ने गरिन्छ । बंगालीहरू यस दिन आफ्नो मन पर्नेखाना माछा-भात खाएर रमाइलो गर्ने गर्दछन्।
भारतका विभिन्न ठाउँमा बैसाख महिनाको पहिलो दिनलाई स्वागत गर्ने फरक फरक तरिका रहेको छ । उत्तर-पश्चिमी राज्य पन्जाब तथा हरियाणामा बसोबास गर्ने सिख समुदायको लागि यो सबै भन्दा ठुलो चाड हो। उनीहरूले यसलाई वैशाखी भन्ने गर्दछन्।
सिखहरूका धर्मगुरु गुरु गोविन्द सिंहले खालसा मतको सुरुवात गरेको स्मृतिमा यो दिन मनाइने गरिन्छ।
उनीहरू आजको दिन रमाइलो गर्ने, भाँगडा नृत्य नाच्ने र मिठो मिठो परिकार खाने गर्दछन्। आज पन्जाब र हरियाणाका धेरै जसो भागमा ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ।
त्यस्तै भारतकै हिमांचल प्रदेश तथा उत्तराखण्डका धेरै जसो ठाउँहरूमा आजका दिन बिशुको मेला लाग्ने गर्दछ।
यस दिनलाई दक्षिण भारतको तेलगु एवं तमिल संस्कृति मान्नेहरूले पनि बिशुको रूपमा मनाउने गर्दछन्।
त्यस्तै भारतको आसाम राज्यमा आजको दिन बिहु पर्व मनाइने गरिन्छ भने अरुणाञ्चल प्रदेशमा सान्गकेन पर्वका रूपमा नयाँ वर्ष मनाइन्छ।
त्यस्तै श्रीलंकाका तमिल र सिंहलहरूले पनि आजको दिनाई धुमधामका साथ नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने गर्दछन्। ‘आलुथ अवरुधु’ भनिने यस पर्वमा श्रीलंकालीहरू मिठो खाना खाने र मान्यजनको आशिर्वाद लिने गर्दछन् । त्यस्तै उनीहरू राबना भनिने ढोलक जस्तो बाजा बजाएर उत्सव मनाउने गर्दछन् ।
उता पाकिस्तानमा यस दिन त्यहाँका अल्पसंख्यक हिन्दुहरूले पनि वैशाख १ गतेलाई पर्वका रूपमा मनाउने गर्दछन्। विशेष गरेर पन्जाब प्रान्तमा बैसाखीको रौनक रहन्छ भने सिन्ध र बलुचिस्तानमा बसोबास गर्ने हिन्दूहरुले समेत यस दिन उत्सव मनाउंने गर्दछन् ।
दक्षिण एसियाका अतिरिक्त म्यान्मार, थाइल्याण्ड, कम्बोडिया, लाओस, चीन, भियतनाम र इन्डोनेसियाको बाली द्वीपमा समेत वैशाख १ लाई साँस्कृतिक नयाँ वर्षका रूपमा मनाइने गरिन्छ।
थाईल्याण्डमा बैसाख एक गतेको दिन सरकारी विदा दिइने गरिन्छ । सोंक्रण भनिने यस दिनलाई सन् १८८८ सम्म आधिकारिक नयाँ वर्षको रूपमा मनाइने गरिन्थ्यो । त्यसपछि ग्रेगोरियन क्यालेन्डर अनुसार सरकारी नयाँ वर्ष मनाइने गरेको भए पनि यस दिनको महत्व घटेको छैन । सोंक्रण संस्कृत शब्द ‘संक्रान्ति’को स्थानीकृत रुप हो ।
बौद्धमार्गीहरूको मुलुक म्यान्मारमा बैसाख १ गते थिन्ज्ञान पर्व मनाइन्छ । यसलाई त्यहाँ संग्करण पनि भन्ने गरिन्छ । यो त्यहाँको संस्क्रित्तिक नयाँ वर्षको दिन हो ।
त्यस्तै लाओसमा पनि नयाँ वर्षको उत्सव सुरु भइसकेको छ । मानिसहरू आजको दिनलाई ‘पि माई’ या ‘सोंक्रण’ मनाउने गर्छ्न् ।
कम्बोडियामा आजदेखि तीन दिनको नयाँ वर्षको उत्सव मनाइंदैछ । त्यहाँ बैसाख १ गतेको दिनलाई ‘महा संक्रण’भन्ने गरिन्छ । भोलि र पर्सि समेत मनाइने यस माहाउत्सवमा विभिन्न पूजा अनुष्ठान गरिने गरेको छ ।
सिङ्गापुर र मलेसिया लगायत मरिससको तमिल समुदायमा बैसाख एक गतेको दिनलाई नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने गरिन्छ । यस दिनलाई ‘पुथांदु’ भन्ने गर्दछन् ।
बैसाख एक गते नै चीनमा जल उत्सव मनाइने गरिन्छ । यस दिनलाई अल्पसंख्यक ‘दाई समुदायको नयाँ वर्षको रुपमा मनाइन्छ ।